Hlalani Upholile kwiSithuthuthu uze uphephe ukushisa
Kutheni ukuvumela ukushisa kwehlobo kufumane indlela yakho yokugibela? Nazi iinqununu ezintlanu zokukunceda uhlale upholile kumavili amabini.
Ininzi iinqununu kunye nesithuthuthu seemoto zixhotyiswe ngeentshukumo, kwaye kulula ukulibala nokuziyeka zivaliwe. Gwema ukutshatyalaliswa komoya ngokutshatyalaliswa ngokuphindwe kabini ukwenzela ukuba uqiniseke ukuba iivents zakho zivulekele ukukhutshwa komoya. Ibhonasi ibonisa ukuba unomhlobo onokujonga ngokukhawuleza ukufikelela kwi-zippers, njengezivulo zokuvula umoya ngaphakathi kwebhokisi lakho.
Enye indlela engacacileyo yokufumana ukuhamba kwomoya ku (ngokucophelela) yimi ekhoneni yakho okanye unamathele emilenzeni xa uhamba; Ngaleyo ndlela uya kuphunyuka ngesikhephe esikhwameni somoya esilula esenziwe yibhayisikili yakho, enokubaluleka kwiithuthuthu okanye iinjinjini ezishushu.
Ngaphantsi kweemeko zokushisa xa ubushushu bakho obubalulekileyo buphakanyisiwe ixesha elide, izinto ezimbalwa ziziva zibhetele kunokuba udonsa kwaye uzikhuphe ngamanzi. Uvakalelwa mhlawumbi aluyi kuhlala ixesha elide njengoko ungathanda, kodwa umphumo wokupholisa ophumayo uya kuphelisa ubunzima bakho.
U-Jorge Lorenzo (umfanekiso ongentla) unokuthi uthathe ixesha elide kunye nokutshintsha kwakhe ukudada emva kokuphumelela kwi-Circuito de Jerez, kodwa uya kwenza kakuhle ngokugaya i-t-shirt yakho ngamanzi apholileyo okanye ukuphosa ithawula emanzi phezu kwentloko yakho ngexesha ikhefu.
Gqoka i Gear Breathable Gear
Awufanele unganikelele ukhuseleko lokuthuthuzela; emva koko, ukukhupha okuncinci kunye nokugquma okuqinisekileyo ukubethelwa kwendlela kunye negazi. Oku kuthethi, ukuba uchitha naliphi na ixesha ukwenza ukukhwela kwehlobo, isitya esiqinileyo se-gear kunye nesigwegwe esikukhuselekileyo siya kukugcina ukhululekile kunokuba isetekethi esidala sesikhumba. Ilizwi lesilumkiso: iingubo azikwazi ukufanisa ukuxhatshazwa kweebhantshi, kwaye izixhobo zokufaka amatye ziyakwazi ukuhlukana nokuphazamiseka, ngoko ugcine ukhumbule ukuba zonke izinto ezikhethiweyo kwisimo sezulu esishisayo ngumsebenzi wokunciphisa. Khetha ngokuhlakanipha, kwaye uya kubetha ibhalansi ehambelana neemfuno zakho.
Ukuhamba kwimozulu eshushu kusenza umkhombe wakho emzimbeni wakho, njengokuba ukujuluka kungaphuma ngokukhawuleza kwaye kukukhenkceze nge-electrolytes ngokukhawuleza kunokuba uqaphele. Ukudaka amanzi emzimbeni kuya kuba yingozi kakhulu xa kuhlaselwa kwindlela; Into yokugqibela oyifunayo i-spell spell ngelixa uhamba nge-70 mph.
Hlalani phezulu ezintweni ngokusela amanzi amaninzi kunokuba ucinga ukuba uyayidinga, kwaye usebenzise ukuphumla ukusalela kwaye uthathe ikhefu lokuhlamba; kuya kuhlawula phantsi kwendlela, kwaye kugcina ingqondo yakho ibukhali ngokwaneleyo ukukhawulezisa iinguqu zakho kunye nokukunceda wenze izigqibo ezingcono. Ukuba unemizila engqondweni yakho, yenza oko abadlali bezemidlalo ababini bakwenzayo kwaye ugqoke i-hydration yakho njengesikhwama se-Camelbak.
Misa iBhayisiki Yakho Ukujongana NeHu
Ukukhupha umoya ophezulu kukuthethele amathuba okuhlala epholile, kwaye ezinye iibhekile zixhotyiswe kakuhle xa zihlaselwa ukushisa kunabanye. Kodwa oko akuthethi akukho izinto onokuzenza ukuze uncede isithuthuthu sakho sikugcine upholile.
Indlela elula yokunyusa intuthuzelo yakho kwimozulu eshushu, ukuvula ama-fairing winds, ukuba unayo, okuya kugcina umoya ujikeleza kuwe. Ngokufanayo, ukuba i-windscreen iyasuswa, unokuzama ukuyifaka ihlobo.
Ukuba isithuthuthu sakho sinomsebenzi wokutshisa, ungase ufune ukuphanda izisombululo emva kweendlela zokulungisa ukushisa kwe-injini. Mhlawumbi awuyi kuhamba ngokufaka i-air conditioning, kodwa usenokumangaliswa ukuba zingaphi izisombululo zifumaneke ngophando olufanelekileyo.
I-Admissions ye-University ye-Seton Hill
Ukubhala ngoNovemba kunye neNcwadi
'Uthande ngokwenene' iiCotes
Iimpawu Zomculi: Ukufumana ngokukhawuleza kwePrawus Blue Paint